12 Tips to Troubleshoot Your Internet Connection - 1
1.9.2020 | 12 Tips to Troubleshoot Your Internet Connection - 1
၁။ အခြား device တစ်ခု (သို့) Website တစ်ခုကို စမ်းသုံးကြည့်ပါ
သိသာထင်ရှားတဲ့အရာတစ်ခုနဲ့ အစပြုလိုက်ရအောင် - ဒီပြဿနာဟာ သင့်ရဲ့ device တစ်ခုတည်းမှာဖြစ်နေတာလား၊ ဒါမှမဟုတ် သင့်ရဲ့ device များအားလုံးမှာဖြစ်နေတာလား? အကယ်၍သင့်ကွန်ပြူတာမှာ ဒီပြဿနာဖြစ်နေပါက သင့်ရဲ့ tablet ဟာရောအင်တာနက်ချိတ်ဆက်နိုင်ရဲ့လား၊ ဒါမှမဟုတ် သင့်အိမ်ထောင်ဖက် (သို့) အခန်းဖော်ရဲ့ laptop တွင်ရော အင်တာနက်ရရှိနေရဲ့လားဆိုတာကို စစ်ဆေးကြည့်လိုက်ပါ။ အကယ်၍ ဒီပြဿနာဟာ device တစ်ခုတည်းတွင်ဖြစ်နေ ပါက သင့်အနေနဲ့ ပြဿနာဟာ ဒီစက်ပစ္စည်းတစ်ခုတွင်ရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့ယူဆလိုက်နိုင်ပါတယ်။
Wi-Fi ကိုဖွင့်ထားပြီး သင်ဟာမှန်ကန်သင့်လျော်တဲ့ SSID ကို မှန်ကန်တဲ့ password ကိုအသုံးပြုပြီး ချိတ်ဆက်ထား သလားဆိုတာကို သေချာစွာစစ်ဆေးပါ။ အကယ်၍ Windows ကိုအသုံးပြုနေပါက သင့် system tray ပေါ်ရှိ network icon ကို right-click ပြုလုပ်ပြီး Troubleshoot Problems ကိုရွေးကာ Windows Network Diagnostic လုပ်ဆောင် ချက်ကို run ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီအရာက တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ပြဿနာများကို adapter ကို reset ပြုလုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့် ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီ့အပြင် သင့် network adapter setting များကိုလည်းစစ်ဆေးပြီး adapter က မှန်ကန်တဲ့ gateway address ကိုအသုံးပြုနေလားဆိုတာနဲ့ အခြားသော setting များကိုလည်း သေချာ အောင်စစ်ဆေးကြည့်လိုက်ပါဦး။
ထို့အတူ အခြား website တစ်ခုကိုလဲ စမ်းသပ်အသုံးပြုကြည့်လိုက်ပါ။ အကယ်၍ သင့်အနေနဲ့အခြားသော website များကို အခက်အခဲမရှိပဲဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ဒါဟာ သင်ဝင်ရောက်လိုတဲ့ website ဘက်က ပြဿနာရှိနေတာဖြစ်နိုင်ပြီး သင့်အနေနဲ့ သူတို့ဖက်က ထိုပြဿနာကိုပြင်ဆင်ပြီးတဲ့အထိ စောင့်ဆိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ အဆိုပါ website ရဲ့လိပ်စာကို downforeveryoneorjustme.com အတွင်းတွင်လည်းရိုက်ထည့်ပြီး စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ ဒီ site ဟာအသုံးပြု၍ရနေသော်လည်း သင့်အတွက်တော့ အသုံးပြု၍မရနေဘူးဆိုပါက ထို website ကို incognito window မှတဆင့်၊ အခြား browser တစ်ခုမှတဆင့် ပြန်လည်သွားရောက်ကြည့်ခြင်း (သို့) သင့် browser ရဲ့ Cache နဲ့ Cookie များကို ရှင်းလင်းကြည့်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပေးကြည့်နိုင်ပါတယ်။
၁။ အခွား device တဈခု (သို့) Website တဈခုကို စမျးသုံးကွည့ျပါ
သိသာထငျရှားတဲ့အရာတဈခုနဲ့ အစပွုလိုကျရအောငျ - ဒီပွူနာဟာ သင့ျရဲ့ device တဈခုတညျးမှာဖွဈနတောလား၊ ဒါမှမဟုတျ သင့ျရဲ့ device မြားအားလုံးမှာဖွဈနတောလား? အကယျ၍သင့ျကှနျပွူတာမှာ ဒီပွူနာဖွဈနပေါက သင့ျရဲ့ tablet ဟာရောအငျတာနကျခြိတျဆကျနိုငျရဲ့လား၊ ဒါမှမဟုတျ သင့ျအိမျထောငျဖကျ (သို့) အခနျးဖောျရဲ့ laptop တှငျရော အငျတာနကျရရှိနရေဲ့လားဆိုတာကို စဈဆေးကွည့ျလိုကျပါ။ အကယျ၍ ဒီပွူနာဟာ device တဈခုတညျးတှငျဖွဈနေ ပါက သင့ျအနနေဲ့ ပွူနာဟာ ဒီစကျပစ်စညျးတဈခုတှငျရှိနတောဖွဈတယျလို့ယူဆလိုကျနိုငျပါတယျ။
Wi-Fi ကိုဖှင့ျထားပွီး သငျဟာမှနျကနျသင့ျလြောျတဲ့ SSID ကို မှနျကနျတဲ့ password ကိုအသုံးပွုပွီး ခြိတျဆကျထား သလားဆိုတာကို သခြောစှာစဈဆေးပါ။ အကယျ၍ Windows ကိုအသုံးပွုနပေါက သင့ျ system tray ပေါျရှိ network icon ကို right-click ပွုလုပျပွီး Troubleshoot Problems ကိုရှေးကာ Windows Network Diagnostic လုပျဆောငျ ခကြျကို run ပေးနိုငျပါတယျ။ ဒီအရာက တဈခါတဈရံတှငျ ဖွဈလေ့ဖွဈထရှိတဲ့ပွူနာမြားကို adapter ကို reset ပွုလုပျပေးခွငျးအားဖွင့ျ ဖွရှေငျးပေးနိုငျပါတယျ။ ဒီ့အပွငျ သင့ျ network adapter setting မြားကိုလညျးစဈဆေးပွီး adapter က မှနျကနျတဲ့ gateway address ကိုအသုံးပွုနလေားဆိုတာနဲ့ အခွားသော setting မြားကိုလညျး သခြော အောငျစဈဆေးကွည့ျလိုကျပါဦး။
ထို့အတူ အခွား website တဈခုကိုလဲ စမျးသပျအသုံးပွုကွည့ျလိုကျပါ။ အကယျ၍ သင့ျအနနေဲ့အခွားသော website မြားကို အခကျအခဲမရှိပဲဝငျရောကျကွည့ျရှုနိုငျနတေယျဆိုရငျတော့ ဒါဟာ သငျဝငျရောကျလိုတဲ့ website ဘကျက ပွူနာရှိနတောဖွဈနိုငျပွီး သင့ျအနနေဲ့ သူတို့ဖကျက ထိုပွူနာကိုပွငျဆငျပွီးတဲ့အထိ စောင့ျဆိုငျးရမှာဖွဈပါတယျ။ သင့ျအနနေဲ့ အဆိုပါ website ရဲ့လိပျစာကို downforeveryoneorjustme.com အတှငျးတှငျလညျးရိုကျထည့ျပွီး စဈဆေးနိုငျပါတယျ။ အကယျ၍ ဒီ site ဟာအသုံးပွု၍ရနသေောျလညျး သင့ျအတှကျတော့ အသုံးပွု၍မရနဘေူးဆိုပါက ထို website ကို incognito window မှတဆင့ျ၊ အခွား browser တဈခုမှတဆင့ျ ပွနျလညျသှားရောကျကွည့ျခွငျး (သို့) သင့ျ browser ရဲ့ Cache နဲ့ Cookie မြားကို ရှငျးလငျးကွည့ျခွငျးတို့ကိုပွုလုပျပေးကွည့ျနိုငျပါတယျ။